တစ်ကိုယ်တော် "စွမ်းအင်" ဖြန့်ဖြူးခြင်းအလေ့အကျင့် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်စု: အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုအောင်မြင်သော reboot မှလာကြ၏။ ဤရွေ့ကားလေ့ကျင့်ခန်းသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသင့်ရဲ့လိင်တံနှင့်အသိပညာအတွက်အာရုံအကြားဆက်သွယ်မှု wiring (re) အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်အခိုင်အမာရှိပါသည်။ ဒီအနိုင် မြန်နှုန်းစိုက်ထူပြန်လည်နာလန်ထူ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူရှိသူများဖြစ်သည်။ “ စွမ်းအင်” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုချက်ကို YBOP မှမဟုတ်ဘဲ rebooters များကပြုလုပ်သည်။
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုအထက်သို့ဆွဲခြင်းအကြောင်းတစ်ခုခုဖတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘောင်းဘီတွင်သာအာရုံစိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါဟာအလုပ်ဖြစ်ပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့လုပ်တယ် ငါရင်ဘတ်နှင့်အထက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်ကိုခံစားရန်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဒါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုအပ်တဲ့ဖိအားကိုယူပြီးကျွန်တော့်ကိုဒီ“ လုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်” ခံစားမှုပေးပါတယ်။ ငါလိုချင်ရင်ငါအိမ်ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပတ်ပတ်လည်မှာပစ်ပြီးသူနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါကြိုက်တယ်၊ နည်းနည်းပိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖွင့်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ယောက်ျားလေးများကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ထို့နောက်မိုင်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုပြေးပါ (အကယ်၍ သင့်တွင်မိန်းကလေးမရှိလျှင်သင်တန်းပတ်လှည့်ရန်)
ယခု၎င်းကိုအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာရှိရာနေရာတိုင်းတွင်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်🙂ငါအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ငါအိပ်ချင်လာပြီးချိုလာတဲ့အခါငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအပေါ်ကိုတက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ပန်းတော့တာမဟုတ်တော့ဘူး။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအမျိုးမျိုးသည်“ တစ်ကိုယ်တော်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းအလေ့အကျင့်များ” ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, site ကိုအဖွဲ့ဝင်များကအကြံပြုနည်းစနစ်ဖြစ်ကြသည်။ (အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏အရသာအတွက်အလွန်ပြင်းထန်လွန်းလျှင်၊ သင်နှင့်စမ်းသပ်လိုသည် kegel လေ့ကျင့်ခန်း.)
ဤတစ်ကိုယ်တော်နည်းလမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ချစ်ခင်။ တွေးတောဆင်ခြင်သောမိမိကိုယ်ကိုနှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုနိုးထရန်နှင့်ထိုပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းကိုဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်အေးချမ်းသောချမ်းသာခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ပြီဆိုပါကသင်၏သက်တော်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်သည်ဤခံစားချက်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်သောအခါသင်၏လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုးဆွတော့မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိပျော်ရွှင်မှုမှာဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်။ ဒါဟာသဘာဝအမြင့်နဲ့တူတယ်။ သင်မှန်မှန်လုပ်ရင်ခံစားမှုဟာနာရီပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မယ်။ ငါကအော်ဂဇင်မပါဘဲ ၁၆ ရက်ကုန်သွားပြီးဒီနည်းလမ်းကိုနေ့စဉ်နီးပါးအသုံးပြုနေပြီ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏ PMO ကိုအခမဲ့ဆက်လက်မထားရှိနိုင်ခြင်းကိုသင်စိတ်ပျက်နေလျှင်၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
အဟောင်းကိုပုံပြင်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည့်သူရဲကောင်းပထမဦးဆုံးကမ္ဘာ့အဖို့ဆုလက်ဆောင်ယူလာမတိုင်မီ / သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူ့ကိုတိုးတက်စေရမယ်ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါလက်ဆောင်ထွန်းလင်းမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ထွက်လှည့်။
မှတ်စု: တချို့ကတစ်ကိုယ်တော်နည်းစနစ် (အရမ်းလှုံ့ဆော်ဖို့) ပထမဦးဆုံးမှာအသုံးဝင်မဟုတျပါ, ဒါပေမယ့်ချိန်ခွင်လျှာပွနျထားတစ်ချိန်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်ဖြေလျော့ဘို့အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာပါ။
အဆိုပါ 6th တိဘက် RITES
က) သင့်ရဲ့အဆုတ်ထဲကလေအားလုံးကုန်အံ့ဖြောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးစွာရပ်။ သငျသညျဤသို့ပြုသကဲ့သို့, ကျော်တင်နိုင်နှင့်သင့်ဒူး ထောက်. ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ထားတော်မူ၏။ တပ်မှထွက်လေကြောင်း၏နောက်ဆုံးသဲလွန်စ, ပြီးတော့, အချည်းနှီးသောအဆုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးဖွင့်ဖြောင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုပြန်သွားပါ။
ခ) သင့်ရဲ့တင်ပါးပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ချထားပါ, သူတို့အပေါ်မှာကျနှိပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပခုံးကိုတက်တွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤသို့ပြုသကဲ့သို့, ဝမ်းဗိုက်အတွက်တတ်နိုင်သမျှဆွဲနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာရင်ဘတ်မြှင့်။
သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအပေါငျးတို့သတင်းမာနေအခြားသောလမ်း, သင့်လက်သီး clench နှင့်သင့်တင်ပါးပေါ်သူတို့ကိုနေရာ, သင့်ပခုံးကိုတက် scrunch ကပြောသည်။ မြေပြင်သို့သင်တို့၏ခြေကိုခြေသည်း။ တကျိပ်၏နှေးကွေးသောအရေအတွက်အဘို့ဤကဲ့သို့သောနေဖို့ကြိုးစားပါ။
(ဂ) ဤရာထူးကိုအဆုံးတိုင်အောင်မလုပ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးထိန်းသိမ်းထားပါ။ နောက်ဆုံး၌သင့်အားအချည်းနှီးသောအဆုတ်များသို့လေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ယူသောအခါနှာခေါင်းထဲမှလေကိုစီးဆင်းစေပါ။
အဆုတ်အပြည့်အဝရှိပါတယ်သည့်အခါတစ်ဦး), နှုတ်တော်ထွက်အမှတဆင့် exhale ။ သငျသညျ exhale သည်အတိုင်း, သင်တို့တဘက်မှာသဘာဝကျကျဆွဲထားတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်, သင့်လက်နက်အပန်းဖြေ။
ခ) ထိုအခါသူတို့ကိုပါးစပ်သို့မဟုတ်နှာခေါင်းဖြစ်စေမှတစ်ဆင့်မှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြု, ခံတွင်းသို့မဟုတ်နှာခေါင်းမှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူယူပါ။ အဆိုပါအရာဝတ္ထုလုံးဝ Tensing အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအကြားအနားယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
3) လိုအပ်လျှင်ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Repeat, ဒါပေမယ့်တခါပုံမှန်အားဖြင့်သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
ဤထုံးတမ်းစဉ်လာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူတစ် ဦး အားချိုပြီးဖြစ်ခြင်းကိုသက်သာစေရန်ဖြစ်သည်။ horny ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာဤအရာသည်ကျွန်ုပ်မွေးစားခဲ့သော Mantak Chia ၏အမြင်ဖြစ်သည်။ လိင်အင်္ဂါများ၌စွမ်းအင်များစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ရလာလေလေစွမ်းအင်များလေလေစုဆောင်းလေလေဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ကို orgasm တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ သင်သည်၎င်းကိုလိင်အင်္ဂါမှတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆွဲထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက။ ဆဌမရိုးရာဓလေ့သည်စွမ်းအင်ကိုမည်သို့ရွှေ့ပြောင်းရမည်ကိုမသိဘဲ၎င်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာစက်မှုချဉ်းကပ်မှုပါပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပြောတယ်
ငါပြောရမယ် - တိဘက်ခြောက်ယောက်ကအံ့သြလောက်အောင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် - ၃ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲလိင်အင်္ဂါများထုတ်လွှတ်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးဖြန့်ကျက်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုငါခံစားရတယ် - ငါမျှမျှတတခံစားရတယ်၊ စွမ်းအင် / ပျော်ရွှင်မှုတိုးလာတယ်။ သငျသညျအမြိုးအနှယျဖိတ်မဖို့စီစဉ်နေလျှင်သင်သာဆဌမလုပ်ဖို့ထင်တယ် - တကယ်တော့ငါ့အရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
“ Fire Breath” ဟုခေါ်သောအသက်ရှူသည့်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ဤညွှန်ကြားချက်များကိုကောက်နုတ်ထားသည် Don Juan နှင့်လိင်စွမ်းအင်၏အနုပညာ Merilyn Tunneshende ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
, ဆိတ်ကွယ်ရာသင်တို့၏ခြေကိုပခုံးအကျယ်နှင့်အတူရပ်သေးအမြစ်တွယ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းခြေထောက်, ဒူးအနည်းငယ်ကွေး။ သင်တို့တဘက်၌သင်၏လက်နက်ဆွဲထား, မြည်းကြိုးကိုဖြည်ခြင်းနှင့်အားလျော့, လက်ချောင်းအနည်းငယ်ကောက်။ သင့်ရဲ့ကျောရိုးဖြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်လည်ပင်းနှင့်ပခုံးကောင်းသောကိုယ်ဟန်အနေအထားထိန်းသိမ်းခြင်း, ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အကွာအဝေးသို့ညင်သာစွာကြည့်။
အခုတော့ပျဉ်၏ကြွက်သားပေါ်တက်ဆွဲခြင်းနှင့်မွှန်ပေါ်တွင်ဝမ်းဗိုက်စာချုပ်ချုပ်ခြင်း, နှာခေါင်းမှတဆင့်အတွက်အသက်ရှူ။ အဆိုပါစွမ်းအင်ကိုဤကိစ္စတွင်အတွက်ချက်ဧရိယာဖြစ်သောကျုံ့၏ဧရိယာမှ, အပူ၏ပုံစံမြင့်တက်သငျ့သညျ။ သငျသညျအပူခံစားရသည်အထိဤနည်းကိုရှူရှိုက်ဖို့ Continue ။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့ကျောရိုးပူနွေးသောစွမ်းအင်ကိုတက်ဆွဲနှင့်သင့်သင့်ရဲ့နောက်ကျောစိတျနှလုံး၏ဧရိယာသို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါကပျော့ပြောင်းပြီး perineal ဆွဲအတူနေတုန်းပဲတစ်ဦးဝမ်းဗိုက်ကျုံ့ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသောမွှန်ပေါ်တွင်ကျော၏သေးငယ်တဲ့ဖြောခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင်သင့်ရဲ့နေရောင်ခြည် plexus ၏နောက်ကျောအထိမြင့်တက်ကြောင့်ပင်ပူနွေးလာလိမ့်မည်။ အခုတော့ဝမ်းဗိုက်ကျုံ့ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားနောက်ထပ်မွှန်, အတူသူတို့ကို flexing အားဖြင့်နောက်ကျောပခုံးဓါးသွားဖွင့်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ရဲ့ပခုံးလှု။ ဒါဟာနောက်ကျောနှလုံးဧရိယာသို့စွမ်းအင်မြှင့်စေမည်နှငျ့သငျတုန်လှုပ်သို့မဟုတ်ချွေးထွက်စေသောရသောသင်၏အလက်မောင်းနှင့်လက်သို့တိုးချဲ့အပူ, ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသှေးရောငျလှမျးခံစားရပေမည်။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။
လာမယ့်မွှန်ပေါ်တွင်လည်ပင်း၏နောက်ကျောမှာကွေးဖြောင့်။ တစ်ဦးဝမ်းဗိုက်ကျုံ့လိုအပ်ပေမယ့် perineal ဆွဲမရှိတော့လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လည်ချောင်း, နား၏နောက်ကျောနှင့်အတူရှူရှိုက်ဖို့ကြိုးစားပါ - သင့်ပါးဟက်, သင်အလိုတော်ရှိလျှင် - သင်ယခုဝေဟင်ထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်အသက်ရှုနေကြသည်။
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများသည်ဝမ်းဗိုက်အားကျုံ့စေခြင်းဖြင့်နှာခေါင်းတစ်ချောင်းသည်သင့်အတွင်းပိုင်းမျက်စိအတွင်းသို့သက်ရှိသတ္တဝါများကိုသက်ရောက်စေပါလိမ့်မည်။ ဤ 'မျက်စိ' သည်နဖူးသို့တစ်လက်မခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်အထက်ရှိလက်မ၏လေးပုံသုံးပုံခန့်တွင်နဖူးများကြားရှိနှာခေါင်းအထက်တွင်ဗဟိုပြုသည်။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကမျက်စိသည်တုန်ခါ။ ဖွင့်နိုင်သည်။ ဤသည်အနာရောဂါငြိမ်းစရာကာလအတွင်းစွမ်းအင်အချို့ကိုကြည့်ရှုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုအနည်းငယ်ရှေ့တိုး။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အရည်ဖြစ်သည့်ရှေ့သို့ရွေ့လျားလာသောအခါအပူကိုစိုစွတ်စေပါ။ နဖူးဆီကနေပူနွေးတဲ့ရေနံ (သို့) ပျားရည်ဟာနဖူးကတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်စက်ကျနေသလိုခံစားရတယ်။
အခုတော့ကိုယ်ဦးခေါင်းကိုဖြောင့်ခြင်းနှင့်ယိုသင်၏အပျော့အာခေါင်ပေါ်မှာစုပြုံပါလိမ့်မယ်။ ဒီစင်တာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အောက်ဖက်အရည်ပျော်, ယခုဘဝ-ပေးခြင်း elixir မျိုကသင့်ရဲ့လည်ချောင်းသို့ပြန့်နှံ့ပါလိမ့်မယ်။
အထက်အဆုပ်ကိုတိုးချဲ့အားဖြင့်နှလုံးဧရိယာထဲသို့ပူနွေးအရည်စွမ်းအင်ရှူ။ ဤသည်မတ်ေတာ၏ပျော့ပျောင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောခံစားခကျြကိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်ထပ်မံဆင်းအရည်ပျော်ကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးဖို့နေရောင်ခြည် plexus နှင့်လှည့်ဖျားထိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထဲသို့ပူနွေးလက်ရှိ Massage, လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်နှင့်အသည်း, ပန်ကရိယနှင့်သည်းခြေအိတ်ဖို့သရက်ရွက်။ အဆိုပါမွှန်ပေါ်တွင်သင်၏ဝမ်းဗိုက်တိုးချဲ့ဆက်လက်သတိရပါ။
ထိုအရပ်မှ, စွမ်းအင်သင့်ရဲ့မျိုးဆက်ပွားဧရိယာထဲမှာစုဆောင်းရန်အသီးအသီးအခြမ်းကနေထောင့်ဖြတ်အောက်ဖက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ တစ်ဦးဝမ်းဗိုက်တိုးချဲ့နှင့်အတူ In-အသက်ရှုအနေနဲ့သင့်ရဲ့လုံ့လရှိသူရေကန်၏အောက်ဆုံးဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအပြီးအစီးယောဂ ထို့နောက်အသက်ရှူဖို့ဘယ်လို, နှစ်ဦးစလုံးဘယ်လိုလိင်စိတ်နိုးထရှည်ဖို့သင်ယူခြင်းရည်ရွယ်တစ်ကိုယ်တော်အလေ့အကျင့်များနှင့်စတင်ကျောင်းသားအကြံပေးများနှင့်ဘယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာ၏ရှေ့ချလှုံ့ဆျောပေးကြောင်းစက်ဝိုင်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်-စိတျထဲတှငျဘဝ-လက်ရှိလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့် အထက်သို့ဦးခေါင်း၏ဦးရစ်သရဖူဆီသို့ကျောရိုးတလျှောက်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ polarity ကသာ "အရေပြားနက်ရှိုင်းသော" ဖြစ်ပါသည် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွား၏ရည်ရွယ်ချက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်။ စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏နက်ရှိုင်းသောအခြေအနေများတွင် polarity သည်ကျော်လွန်သွားသည်။ celibate ပြုလုပ်စဉ်ဤအလုံးစုံပြည့်ဝခြင်းသဘောကိုတွေ့ကြုံခံစားရခြင်းအားဖြင့်ရင့်ကျက်မှုအား“ မပြည့်စုံခြင်း” အတွက်ကုသနည်းတစ်ခုအဖြစ်ရိပ်စားခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင်လူတစ် ဦး သည်ချစ်မြတ်နိုးသူတစ် ဦး ထံမှ“ ရရန်” ကြိုးစားရန်နည်းသည်။
အဆိုပါ "ကိုယ်ပိုင်-ခန္ဓာကိုယ်ယောဂလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်" ဟုသိ၏လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် Self-လှုံ့ဆော်သည့်လိင်အင်္ဂါမှကျောင်းသားများအတွက်တောင်းဆိုထားသည်။ orgasm ယေဘုယျအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်လျက်, နှိုးဆော်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဆင်းမှုတ်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးထုံးစံ၌ကျောရိုးတက်သုံးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ celibate Practitioner နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အခါတိုင်းစုစည်းသို့မဟုတ်နှိမ်နင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တစ်ခုခံစားမှုလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ, ဦးခေါင်းသို့မဟုတ်စိတ်နှလုံးမရှိဖြစ်သကဲ့သို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
ငါတကယ်စဉ်းစားခဲ့သည် karezza တစ်ညနှင့်အဘယ်ကြောင့်အပြာရောင် idk ထဲက, ဝမ်းထဲကမြန်ဆန်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူရှူ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်လုံးအပေါ်အလွန်ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု / တုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါတတျနိုငျသအဖြစ်တက်ထားရှိမည်။ ထိုအခါငါကောင်းတဲ့5မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့အပင့်ကူ / တုန်ခါမှုအတွက်ရေချိုး။ ငါသုတေသနလုပ်နေတာကတကယ်တော့အဲဒါဟာ Bhastrika လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူကိရိယာပဲ။
အဲလစ်ဘန်ကာ Stockham MD, ပိုလျှံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထုတ်ဘို့ဤနေ့စဉ်တရားအားထုတ်ရန်အကြံပြုသည်။ တစ်ဖြောင့်ကျောထောက်နောက်ခံကုလားထိုင်အတွက် 15-20 မိနစ်ထိုင်နေ။
လက်များကိုဘေးတိုက်ချထားပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစတုရန်းပေငြိမ်ဝပ်စွာနေ; ရင်ဘတ်ပေါ်မေးစေ့ကိုရှေ့သို့ချလိုက်ကာခန္ဓာကိုယ်၏ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ လွတ်ပါ; ဒူး၊ ခြေ၊ ခြေချောင်း၊ လက်မောင်း၊ လက်နှင့်လက်ချောင်းထိပ်ဖျားများသည်စိတ်အေးအေးထားရမည်။ မျက်ခွံ၊ ပါးစပ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုလွှတ်ပေးသင့်သည်။ လည်ချောင်းမေးရိုးနှင့်အစာအိမ်လိုက်လျောညီထွေမှနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လုပ်ပါ "ငါအရှုံးမပေး။ ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ပြီ။" တိတ်ဆိတ်စွာနှေးနှေးစွာအသက်ရှူပါ။ မိနစ် (၁၅) မိနစ်မှ (၂၀) ​​မိနစ်အတွင်းငြိမ်သက်စွာနေပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအပန်းဖြေမှုအခြေအနေကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအခါသင်၏အတွင်းပိုင်းသတိသည်သင်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုသက်တမ်းတိုးရန်တိတ်တဆိတ်အလိုရှိသည်။ သငျသညျထ, ရေတက်ကြွသန်စွမ်းခြင်းနှင့်နုပျိုလိမ့်မည်။ မင်းဟာမင်းဘ ၀ ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ ဖြစ်လာပြီ၊ အားလုံးဒေသခံထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်ဝယ်လိုအားပျောက်ကွယ်သွားသည်။ (AB Stockham MD ၏“ The Lover's World” စာမျက်နှာ ၁၀၅-၁၀၆)
လိင်စွမ်းအင်ကိုနိုးထရန်အတွက် - အချက်နှစ်ချက်ကိုစတင်ပါ။ နံနက်တိုင်းအိပ်စက်ခြင်းပြီးနောက်အခန်းအလယ်၌မတ်တပ်ရပ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပါ။ လှုပ်ခါသောသူ - ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြေချောင်းမှ ဦး ခေါင်းသို့လှုပ်ခါပြီး၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ကိုပေးနေသည့်အလားအော်ဂဇင်နီးပါးဟုခံစားရသည်။ ပျော်ရွှင်မှုခံစားပါ၊ အာဟာရဖြည့်ပါ။ အသံအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်လိုပါကဆယ်မိနစ်မျှသာခံစားပါကစတင်ခံစားပါ။
ထိုအခါခြောက်သွေ့သုတ်ပဝါနှင့်အတူတကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ပြီးရေချိုးခန်းယူပါ။ နံနက်တိုင်းဤသို့ပြုလျက်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရက်သတ္တပတ်အတွင်းချိန်ခွင်လျှာရောက်လိမ့်မည်။ လင့်ခ်
techniqueလိင် - စင်တာကိုနှိုးဆွသောအခါ၊ သုတ်ရည်သုတ်ရည်ထုတ်ယူသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးသည်။ စိတ်၌လိင်ဆန္ဒအယူအဆတစ်ခုရှိလျှင်နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။ သင်၏စိတ်ကိုလိင်အင်္ဂါများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးပန့်ကိုအပြင်သို့ဆွဲတင်သကဲ့သို့ပန့်ကိုရေနှင့်ပြည့်စေသကဲ့သို့အတွင်းသို့လိင်အင်္ဂါများကိုဝမ်းထဲသို့ကျစေပါ။ ဒါကို Yoni Mudra လို့ခေါ်တယ်။ ထိုအခါသင်၏မျက်စိပိတ်။ တွေးတောဆင်ခြင်ပါ၊ “ ယခုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအောက်ပိုင်းလိင်အင်္ဂါမှသည်ထောင်သောင်းချီသောကြာပန်း (Sahasrara Chakra) အထိကြည့်နေသည်။ ” Seminal စွမ်းအင်သည်စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည့်မည်သည့်အချက် (organ) ကိုမဆိုစီးဆင်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Sahasrara Chakra ကိုအာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင် bioelectric energy သည် activated Muladhara Chakra မှတစ်ဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းတွင်အလဟ, ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းပြီ။ သင်၏စိတ်သည်လိင်အပျော်အပါးကိုစွဲမက်နေဆဲဆိုလျှင်၊ သင်သည်စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရက်အနည်းငယ်မျှခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ပြင်းထန်သောစိတ်ဆန္ဒဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းခံရလျှင်၎င်းသည်သင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုများစွာရရှိလိမ့်မည်။ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများသည်ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူပါရှိသော်လည်းသင်ဤနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျဆင်းသွားကြောင်းသင်တိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
နောက်ထပ် technique ကို: ကိုမဆိုခိုင်မာတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းလုံးဝအဆုတ်ထဲကနေအားလုံးလေထု exhale နှင့်အသက်ရှုထုတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ဝမ်းကျုံ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကျောရိုးဆီသို့ဦးတည်သည်သင်၏ခါးယူပါ။ ဒီ Two-သုံးကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပြီး, အကိလေသာ pacified ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင် seminal ဥတုထံမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ဒီနည်းပညာကအရမ်းရိုးရှင်းပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောယောဂခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ထဲမှာ Air ကို Apaana Vayu ဟုခေါ်သည်။ Apaana Vayu ၏အားကောင်းအတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါကိုနှိုးဆျောနှင့်စိတ်ကိုပူပန်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ လေထု၏မာန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းအားဖြင့်, Apaana Vayu အားနည်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိင်-စင်တာကိုသက်ဝင်လို့မရပါဘူး။ ထိုမှတပါး, နောက်ပြန်ဝမ်းနှင့်ခါးစာချုပ်ချုပ်အသုံးပြုပုံလိင်-စင်တာထဲတွင်ကျန်ရှိသောစွမ်းအင်ခါးဆီသို့ဦးတည်သွားသည်။ ဒါကြောင့်မပိုစွမ်းအင်လိင်-စင်တာကိုသက်ဝင်မှထွက်ခွာအရှင်သုတ်ရည်လွှတ်တားဆီးနေသည်ရှိသေး၏။ ဒီနည်းပညာမဆိုပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ, မည်သည့်အရပ်ဌာန၌လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွလည်းမရှိပင်လျှင်ဤ technique ကိုမှန်မှန်ကျင့်သုံးရပါမည်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့ကိုပေးတော်မူ၏။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပေါ်စမ်းသပ်နေဖြင့်အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အမျိုးမျိုးသောဒေသများပေါ်တွင်ထန်းထိထိမိမိအသုံးပြုစောငျ့ရှောကျပါဘူး။ စွန်ပလွံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားလက်ချောင်းထက်လျော့နည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့စွမ်းအင်မြင့်မားနှင့်ထို့ထက် ပို. ကြားနေအနာရောဂါငြိမ်းစရာပုံရသည်။
နောက်တစ်ခါသင်ယောက်ျားများသည်တိုက်တွန်းမှုကိုခံစားရသောအခါသင်၏လက်ဖဝါးကိုသာသင်နှင့်အတူ cupping လုပ်နေစဉ်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်လေ့လာရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ သင်စိုက်ထူပါကသင်၏လက်ဖဝါးကိုနူးညံ့ငြိမ်သက်စွာထားပါ။ ဤသည်တိုက်တွန်းမှုအတွက်အအေးမိပုံရသည်။ သငျသညျအဟောင်းလမ်းကြောင်းဟောင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလှည့်လည်ခဲ့ကြရင်တောင်ဒါကကူညီနိုင်ပါတယ်။ လေထီးအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။
သင်အိပ်မပျော်မီလိင်စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှုကိုသင်ကြိုးစားဖူးသလား။ သင်၏လိင်တံကိုညင်ညင်သာသာခွက်နှင့်အခြားလက်ကိုသင်၏ရင်ဘတ်သို့မဟုတ်နှလုံးပေါ်တွင်တင်ရန်လက်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ထန်းပင်နှင့်လက်ချောင်းဖိအားနည်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ သင်၏လက်ကိုသင်၏ပေါင်ပေါင်ပေါ်သို့တင်ထားရန်လည်းကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့မှသာသင်၏လက်သည်နောက်ကျောသည်သင်၏လက်မနှင့်လက်ညှိုးကြားရှိ vee-shape areaရိယာတွင်သင်၏ scrotum သို့မဟုတ်လိင်တံကိုညင်ညင်သာသာအနားယူနိုင်သည်။ အဆင်ပြေသောအရာကိုလုပ်ပါ။ စွမ်းအင်စီးဆင်းနိုင်အောင်စိတ်ကူးသည်လှုပ်ရှားမှုနည်းသည်။ သင်ဘာကိုသတိထားမိမှာလဲ။ တစ်ခါတလေငါလုပ်တယ်၊ တစ်ခါတလေတော့ငါမလုပ်ဘူး။ ငါဒီတစ်လက်တည်းတောင်လုပ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ညမှာငါ့နှလုံးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်ပြီးငါ့ ဦး နှောက်နဲ့လိင်တံအကြားစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုခံစားရတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယောနိ၏ကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအရှိန်အဟုန်ဖြင့်အသက်ရှူခြင်းကိုလေ့ကျင့်သည်။ ကျွန်မရဲ့ယောနိကိုလက်ဆန့ ်၍ ညင်ညင်သာသာဂရုစိုက်သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုတကယ်အများကြီးငြိမ်သက်။ ငါအခြားတစ်ဖက်ကိုဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်အောက်မှာထားတယ် (ငါ့နှလုံးကိုရောက်ဖို့) ... အဲဒီမှာထားပါ။ ဒါကအဖြစ်ကောင်းစွာကူညီပေးသည်။ လိင်အင်္ဂတေ၏အရေးတကြီးနှင့်အတူငါ၏လိင်အင်္ဂါ sllloooowwwwwlllllyyy အတွက်တင်းမာမှုစဲအဖြစ်ငါအိပ်ပျော်ဖို့ညာဘက်သွားပါ။ မနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အခါငါအရမ်းပျော်တယ်
အဆိုပါ T5T လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
Carolinda Witt ကတီထွင်အဖြစ်။
Mantak Chia အားဖြင့်ဤစာအုပ် [Daoist] ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် rechanneling များအတွက်မြောက်မြားစွာလေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ non-orgasm non-ejaculatory ထုံးစံရှိသူ၏လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ သော့ချက်များ: ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၏ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း, အပန်းဖြေခြင်း, ဝိညာဉ်တော်သည်။